Siyaasiga C/laahi Sheekh Xasan oo laga saaray liiska musharixiinta kuriga Aqalka hoose ee baarlamaanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Siyaasiga C/laahi Sheekh Xasan oo laga saaray liiska musharixiinta kuriga Aqalka hoose ee baarlamaanka
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu faragelin culus ku sameeyay kursi ka mid ah kuraasta beesha Wacbuudhan/Abgaal ee lagu dooranayo magaalada Jowhar.
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa liiska musharixiinta u tartameeysa Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ka saaray wasiir ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo lagu magacaabo C/laahi Sheekh Xasan, kaas oo ku adkeeystay inuu u tartamaayo xilkaan, kadib markii uu taageero ka helay Ugaaska beeshiisa.
Waxaa magaalada Jowhar ka dhacay waan-waan iyo dadaalo lagu doonayo in muranka kursigaan ka taagan lagu xaliyo, iyadoona la sheegayo in kulankaasi uu fashil ku dhamaaday.
Arrinta ugu weyn ee kursigaan beesha Wacbuudhan/Abgaal ayaa la sheegayaa inay salka ku heyso awood qeybsiga beesha Daa’uud, waxaana hore jufo ka mid beeshaan ay u heshay xildhibaan ka mid ah Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Musharixiinta maanta ku tartamaya kursigaan ayaa kala ah, Maxamed Axmed Beerey oo sida la sheegay taageero weyn ka heysta madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir iyo musharaxa kale ee la tartamaayo oo lagu magacaabo Injineer C/qaadir Caraboow oo isna ah wiil dhalinyaro ah oo taageero weyn ka heysta siyaasiyiinta kasoo horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta badan beesha Abgaal.